यी हुन् सांसद आलमलाई सिंघम शैलीमा समाउने शाहशी रौटहट प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्री, जस्ले १५ एसपीले गर्न नसकेको काम गरेर देखाइदिए ! – Khabar Silo
त्यसदिन सांसद आलमलाई कसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो त ? त्यस विषयमाम हामी चर्चा गर्नेछौ । सामूहिक ह’त्याकाण्डको १२ वर्षपछि बुधबार अपरान्ह राजपुर नगरपालिका–२ स्थित फरहदवा गाउँ प्रहरीको ठूलो फौजद्वारा घेरिएको थियो । गाउँमा फेरि अर्को सन्नाटा छाएको थियो । मोहम्मद अफताव आलमको ‘राज’ भएकाले प्रहरीहरु दिउँसै हिंड्न डराउने उक्त गाउँ त्यसदिन प्रहरीको कब्जामा थियो ।प्रदेश राजधानी जनकपुरबाट प्रहरी थपिइरहेका थिए । आलमलाई पक्राउ गर्दा राज्यले निकै ठूलो जोखिम उठाएजस्तो देखिन्थ्यो ।
१६ जेठ ०६९ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर ग-यो । इजलासले घटनालाई गम्भीर प्रकृतिको भन्दै सम्पूर्ण रुपमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो । तर विडम्बना, सर्वोच्चको आदेश पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरीले अटेर गरिरहे । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयल पाँचपटकसम्म ताकेता पनि ग-यो । तर, कार्यान्वयन भएन ।छैटौँपटक ताकेता आउँदा एसपी भूपेन्द्र खत्री जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएर आइपुगेका थिए।
यी हुन् आलमको संरक्षणमा लाग्ने १५ एसपी
बम वि&स्फो&टमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जि’उँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक ह$त्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगेका छन्। घटनालगत्तै प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामी र नवराज मैनालीले लेखेका समाचार अनुसार घटना हुँदा रौतहटको प्रहरी प्रमुखमा लक्ष्मण न्यौपाने थिए।
त्यसपछि क्रमशः जयबहादुर चन्द, घनानन्द भट्ट, पीताम्बर अधिकारी, धनश्याम अर्याल, ठूले राई, महेशविक्रम शाह, गोविन्द परियार, उमेश रञ्जितकार, सानुबाबु थपलिया, पद्युम्न कार्की, गणेश रेग्मी, यज्ञविनोद पोखरेल, रवीन्द्र केसी, भूपेन्द्र खत्री रौतहटमा एसपी भएर गए। हालका एसपी खत्री बाहेक त्यसअघिका १५ एसपीले पीडित पक्षको न्यायको गुहार नहुनी आलमको बचाउमा लागेका थिए।
६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न बनाउन लगाएको बम वि&स्फो&ट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम प-क्रा-उ परेका छन् । २० जनाभन्दा बढीको ह$त्या गरिएको जघन्य अप-राधको आरोप लागे पनि आलम अहिलेसम्म प्रहरीकै संरक्षणमा थिए।
प-क्रा-उ गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई प्रहरीले छोएको थिएन । यो १२ वर्षमा रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न १६ जना एसपी जिल्लामा गए । तर, १५ जना एसपी फेरिँदासम्म अनुसन्धानमा कसैले पनि अग्रसरता देखाएनन्, उल्टै आलमलाई संरक्षण दिए।
मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदन मात्र होइन, मृतकका आफन्तका अनुसार जिल्ला प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्व दोषीलाई प-क्रा-उ गर्न होइन, घटना लुकाउन र आलमलाई सहयोग गर्न मात्र जुटिरह्यो ।
पीडित पक्षले पटक-पटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पनि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिपर्यो।
हुलाकमार्फत उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ सेटल गर्ने योजनाअनुसार नै त्यो काम भएको थियो । सोहीअनुसार आलम र उनका सहयोगीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
गत २ फागुनदेखि रौतहटमा उपस्थित भएका एसपी भूपेन्द्र खत्री अन्ततः हिरो भएका छन् । आलमलाई प-क्रा-उ गर्न अहिले प्रहरीलाई सहज अवस्था पनि थियो । किनकि, सत्तारुढ दलकै पहुँचवाला नेताहरूसमेत पछिल्लो समय प-क्रा-उ परेका थिए ।
विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा यस्ता मुद्दामा नेतालाई प-क्रा-उ गर्न सरकार नै हच्किने गरेको थियो । अहिले सरकारबाट समेत प्रहरीलाई साथ छ । ‘राज्यमा स्थायी सरकार हुनु र अस्थिर सरकार हुनुमा कति फरक पर्छ भन्ने यो घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीले पहिलेदेखि नै प्रयास गरे पनि सरकारको साथ नहुँदा आलमजस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।’
रेलको अध्ययन र सुरुङमार्ग निर्माणमा चीनले सघाउने, योजना पूरा गर्न राष्ट्रपति सीको जोड
काठमाण्डौ – नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुँदैछ । भेटवार्तापछि पूर्वाधार विकासमा सम्झौता हुने कार्यक्रम छ । सम्झौतामा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र काठमाण्डौ–केरुङ सुरुङमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । चीनले केरुङबाट काठमाण्डौ जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । करिब २४ किलोमिटर लम्बाइ […]
३० असोज, काठमाडौं । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी (सपा) र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक महिनाभित्र एकता गर्ने तयारी भइहेको राजपा वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका संयोजक महतो पार्टी एकीरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र केही प्राविधिक […]